Apple TV + na-ejide ikike maka ihe nkiri The Macbeth Tragedy na Denzel Washington | Esi m mac
Apple TV + ewerewo ikike na nke ọzọ Nsogbu Macbeth, ihe nkiri izizi Joel Coen dere ma duzie na-enweghị nwanne ya na onye mmekọ ihe nkiri bụ Ethan Coen. Ihe nkiri ahụ A ga-ewepụta ya na sinima nke mbụ gburugburu ụwa n'oge nke anọ nke 2021, tupu atụgharịa ụwa na Apple TV +.
Dabere na Deadline, a na-ewere ihe nkiri a dị ka ọrụ dị ùgwù na a onyinye oge mmeri. Ọ kpakpando Frances McDormand na Denzel Washington, multi-Oscar mmeri, na Coen onwe ya nwere anọ Academy Awards. Site na ndepụta dị otú ahụ, ihe ole na ole nwere ike ịgahie.
McDormand na-egwu Lady Macbeth na Washington na-egwu Lord Macbeth, na ụdị ụdị ọkpụkpọ William Shakespeare. A gbara ihe nkiri ahụ na oji na ọcha. Coen nwekwara opted maka zere ime ihe nkiri n'èzí, na-ahọrọ ihe ọ kpọrọ "enweghị isi" nke ihe nkiri ụda.
Ihe ndi ozo bu ndi Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling na Brendan Gleeson. Onye na-ese ihe nkiri, Bruno Delbonnel, ndị na-ese ejiji, Mary Zophres, na onye na-ede akwụkwọ, Carter Burwell, bụ ndị maara nke ochie Coen.
Nkwekọrịta a na-aghọ isiokwu na-adọrọ mmasị maka oge ọzọ na-agụnye ihe nkiri ahụ CODA, nke Sian Heder duziri, onye meriri Onyinye 4 na emume Sundance, tinyere onyinye Audience na Grand Jury Prize.
Iji CODA, anyị ga-agbakwunye Finch, nke Tom Hanks na-akpọ, Ihe nkiri akụkọ sayensị sitere na Amblin Entertainment nke Miguel Sapochnik duziri, a na-atụ anya na fim ahụ ga-amalite na Apple TV + mgbe afọ a gasịrị.
Tanto CODA dị ka Finch na ọdachi nke Macbeth bụ 3 na-akpali Apple nzo maka iji ruo eruo maka agụmakwụkwọ Awards.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple TV + na-ejide ikike maka ihe nkiri The Macbeth Tragedy na Denzel Washington
Ihe mbu Geekbench guru ohuru ohuru nke iMac 24